ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.AOX လိမ့်မည် အောင် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးမှုများကို သို့ အဆိုပါ အနာဂတ် နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-မေး စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r, အသစ်က နည်းပညာ နှင့် ဆက်လက်နေသော cusသို့mer ဝန်ဆောင်မှု, နှင့် ကြိုးစား သို့ ဖြစ်လာသည် တစ်ဦး globတစ်ဦးl leတစ်ဦးder တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry တွင် အဆိုပါ 21 ရာစု။
AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ၏ 1. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
AOX-မေးစီးရီးများအတွက် 4. လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်မှထပ်အသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator:
စျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသော inquiey အဆိုအရကျနော်တို့ AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator တစ်စီးရီးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုအဆို့ရှင်အရည်ကိုထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါသုံးလပတ်-အလှည့်ထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်သမားရိုးကျစီးရီး (AOX-R, AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator) နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားစီးရီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ အားလုံးစီးရီး ON-OFF, Module နှင့်အသိဉာဏ်ထုတ်ကုန်များကရေးစပ်နေကြသည်။ မျိုးစုံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများ၏အကျိုးကိုဆည်းပူးနေစဉ်နှစ်တွေကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အလေ့အကျင့်များနှင့်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးလယ်ကွင်းကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေအတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် , ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator သို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
မေး: AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်